विवाहित प्रेमिकाले आफ्नो कुरा नमानेपछि प्रेमीले उठाए खतरनाक कदम
HOME » विवाहित प्रेमिकाले आफ्नो कुरा नमानेपछि प्रेमीले उठाए खतरनाक कदम
विवाहित महिलासँग प्रेममा परेका एक युवकले आफ्नी प्रेमिकाले आफूले भनेको नमालेपछि निकै खतरनाक कदम उठाएका छन् । ती युवकले आफ्नी पहिल्यै विवाहित प्रेमिकालाई बिहेको प्रस्ताव राखेका थिए । तर, ती महिलाले नमालेपछि युवकले विष पिएर आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् ।
उनले विष पिएर जानकारी पाउनासाथ परिवारले तत्कालै अस्पताल लिएर गए । अहिले ती युवकको अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ । भारतको बरेली फरीदपुरका केशव शर्मा नामका ती युवक लोटस कलेजमा पढ्दैछन् । सेप्टेम्बर २०१७ मा फेसबुकमा एक सरकारी शिक्षककी पत्नीसँग उनको मित्रता भएको थियो। विस्तारै त्यो मित्रता प्रेममा बदलियो ।
उनीहरुले यसपछि फोन नम्बर साटासाट गरे । घरबाहिर भेट्नको लागि प्रेमिका एउटा कलेजमा भर्ना भइन् । उनीहरु यतिसम्म नजिक भए कि बिहे गर्नको लागि तयार भए । तर, ३१ डिसेम्बर २०१७ का दिन राती प्रेमिकाले अचानक बिहे गर्न अस्वीकार गरिन् । यो कुराबाट रुष्ट ती युवकले शुक्रबार विष पिएका हुन् ।
‘बाहुबली’भन्दा भव्य हुनेछ प्रभासको ‘साहो’, यसकारण तोडिनेछन् अहिलेसम्मका सबै रेकर्ड
यी ५ काम भुलेर पनि नगर्नुहोस, कलेजो खत्तम हुन्छ : डा सुवास भट्टराई
खतरनाक बाघले बालकहरुलाई आक्रमण गर्न खोज्दा कुकुरहरुले यसरी बचाए, हेर्नुहोस् भिडियो
सङ्घीयता ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ कङ्गाल बन्दै देश : केसी
नेपाल आइडल सिजन-२ मा यी हुन् ती प्रतिस्पर्धी जसले निर्णायकलाई बेसरी हँसाए
डिभोर्स चाहेका दम्पतीलाई अदालतले दियो अनौठो आदेश, ४ दिनपछि भयो सोच्दै नसोचेको घटना
महिला पुरुषले बुझ्नै पर्छ भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ कानुनका यी तथ्य
यी पाकिस्तानी प्रहरी अधिकृतलाई सुन्दरताले बनायो टेन्सन, १० तस्वीरमा हेर्नुहोस् उनको सुन्दरता
तापसी पन्नुले पार्टीमा सारीमाथि टाइ लगाएर पुगेपछि..., हेर्नुहोस् १० फोटोहरु
पुष्पलाल लोकमार्गमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा तीन बम फेला, दुई पक्राउ
भारतमा सलमानकी प्रेमिकाको रोल दिशा पटानीले निभाउने, कटरिनाको रोल के ?
न्यूयोर्क च्याप्टरद्वारा तामाङलाई स्वागत एवं सम्मान
अशोकले प्रधानमन्त्री ओलिलाई घर उद्घाटन गरिदिन आग्रह गरे (भिडियो सहित)
बकर ईदमा सार्वजनिक विदा दिन सरकारसँग माग
क्यालिफोर्नियामा यो हप्ता राफल चिट्ठा खुल्दै
‘झोला भित्र के होला’की युनिताले कसरी जितिन् त ‘मिस वर्ल्ड डाइभर्सिटी’? रहस्य यस्तो
ओमनको सलाम एयरले अब मस्कट-काठमाडौँ सिधा उडान भर्ने